ဘယ်သူ့တာဝန်လဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဘယ်သူ့တာဝန်လဲ
Posted by ကောင်းမြတ်သူ on Jan 18, 2012 in Myanma News | 16 comments
ကျွန်တော်တို့မြို့မှာ အခုလအထိတော့ မီတာထိန်းသိမ်းခက ၁၀၀၀ိ/- ပဲရှိသေးတယ် Facebook ထဲမှာတင်ထားတဲ့ ဒီနေ့ date နဲ့ဓါတ်ပုံတစ်ပုံမှာ ထိန်းသိမ်းခ ၂၀၀၀ိ/-ဖြစ်နေတယ် ဘာမှားတာလဲကျွန်တော်မသိလို့ ကူညီကြပါအုံး. အဲဒီမီတာတွေပျောက်ရင် ဘယ်သူတာဝန်ယူမတုံး…ပြောကြပါအုံး။။ ကူညီကြပါအုံး…..အရပ်ကတို့ရေ
မီတာပျောက်ရင်ကိုယ့်တာဝန်။ ပိုက်ဆံမသွင်းရင်ကိုယ့််တာဝန်။ ၀ါယာရှော့ဖြစ်ရင်ကိုယ့်တာဝန်။ ဒါဘဲ။ တာဝန်မယူချင်ရင်မီးမသုံးနဲ့။
အစိုးရကဈေးကွက်စီးပွားရေးအရ ပြည်သူတွေကို မ တရားတောင်းစားနေတယ်လို့ မြင်မိတယ်။
တရားမျှတတယ်လို့ ထင်ပါသလား ။
ဒဂယ်တော့…. မိမ်ိတာဝန်သာလျှင်ဖြစ်ပါကြောင်း ….
လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ တာဝန်သိတဲ့သူတိုင်းမှာ တာဝန်ဆိုတာရှိပါတယ်။ တာဝန်ဆိုတာ သူများကပေးမှ ရှိတာမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူး။
အကြံပေးရရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၊ (ဥပမာ မြို့နယ်ရုံး) ကိုသွားပါ။ သိလိုသမျှကို သေသေချာချာ မေးပါ။ တာဝန်ရှိသူက ညွှန်ကြားတာကို လိုက်နာပါ။ တကယ်လို့.. တကယ်လို့များပေါ့လေ..တချို့ ၀န်ထမ်းတွေကို ကိုယ်က ငွေမပေးမိလို့ မေးရမြန်းရတာ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီး လာဘ်ထိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့၊ အဲဒီ့ဌာနက အုပ်ချုပ်သူထံဝင်တွေ့ပြီး စကားပြောကြည့်ပါ။ ပြေလည်အောင်ပြောပါ..အဆင်ပြေမှာပါ။ အဲဒါမှ မရရင် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနကို တိုင်ပါ။ အစိုးရရုံးတွေကို ၀င်ထွက်ဖို့မကြောက်ပါနဲ့။ အဲလိုကြောက်ကြလို့လည်း တချို့သော လိမ်စား၊ ခြောက်စားသူတွေ သူတွေရဲ့ ဒဏ်ကို ခံနေကြရတာပါ။
Green Rose တို့တွေရဲ့ အကြီးဆုံးအပြစ်က မှားမှန်းသိရက်နဲ့ လက်ခံကြတာပါ။ ပြင်မပေးရဲ ကြတာပါ။
တစ်ယောက်ချင်း ပြင်မှ တစ်တိုင်းပြည်လုံးပြောင်းလဲမှာပါ။ မှန်တာကိုလုပ်ဖို့ မကြောက်ပါနဲ့။
Green Rose ရေမှန်တိုင်းလဲမကောင်းတာကဂွကျတာပဲ။ အပေးဘူးဆိုပြီးဘယ်လောက် ပဲကြွေးကြော်သွားပါစေဟိုရောက်တော့တရားဝင်တောင်းတာပဲ။ အဲဒီတော့လဲမပေးလို့မရပြန်ဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ သူကအရင်ခေတ်လိုလဘက်ရည်ဖိုးတောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ အခုလုပ်ပေးတဲ့စာရွက်စာတန်းကြေး ၁ သောင်းခွဲပေးပါဆိုတော့မပေးရင်ဒီ စာရွက်တွေပေးမယ့်ပုံမှမရှိတော့ပေးရတာပဲ။ ဒီ ၁ သောင်းခွဲနဲ့လဲဘယ်တိုင်ရမလဲ။ သူကလဲယူကြောင်းလက်မှတ်ထိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ ကိုယ့်ကိစ်စတွေက လဲသူတရုံးထဲမဟုတ်ဘူးလေ။ သူ့ဆီကစာရွက်ရမှနောက်တရုံး။ နောက်တရုံးမှာ စာရွက်ရမှနောက်တရုံးဆိုတော့အချိန်ကိုငဲ့ကွက်သောအားဖြင့်ကိုယ့်အလုပ် အဆင်ပြေချောမွေ့ရေးအတွက်မပေးချင်လဲပေးရတော့တာပဲ။အဲဒီတော့လဲပေါ့လေ။ ပေး၍ပြန်ခဲ့ရသည်ပေါ့။
အရေးကြီးတာတယောက်ချင်းလိုက်ပြင်ဖို့ထက်ကြိုးနီစနစ်ပပျောက်ဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ကြိုးနီစနစ်ရှိနေသေးသ၍တော့ဒီလိုပဲပေးကမ်းခြင်းသည်အောင်မြင်ရာ၏ဆိုတာဖြစ်နေအုံးမှာပါ။ တယောက်ချင်းပြင်တာထက်ကိုအထက်ကခေါင်းဆောင်တွေကစနစ်တွေပြင်လိုက်ရင် ဒါတွေပြောနေစရာတောင်လိုတော့မယ်မထင်ပါဘူး။
I had and experiance with this case.
Once, I had to go toaGovt office.
Befor, this is not my duty, at that time, one of our staff who uaually go to there was not came to office and I had to go there instead of this staff.
I went there and gave some fees and came back to our office.
When I reported the cost for this to our manager, he exclaimed that ” Didn’t you give some undertable”. And I said No.
They all were wondering on it. Usually they had to pay at least 15000/- for this case.
That’s the point, I didn’t show any manner that I am ready to give undertable fees for my case.
So.. the staffs from this office didn’t dare to ask for unlegal money.
Whenever I go to any govt office, I never give money without asking the reason. If they are asking legally I am ready to give, but if they are asking unleagally, I will never give at least 1 cent.
စာရေးသူ အင်ဖမေးလ်ရှင်းပေးတဲ့နေရာမှာ နည်းနည်း လိုနေပါတယ် …facebook ထဲမှာတင်ထားတဲ့ ဒီနေ့ date နဲ့ဓါတ်ပုံတစ်ပုံမှာ ထိန်းသိမ်းခ ၂၀၀၀ိ/-ဖြစ်နေတယ် လို့ပဲ ပြောထားတယ် … ဘယ်သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွခ်မှာလဲ ဘယ်သူထောင်ထားတဲ့ ပေ့ခ်ျမှာလဲဆိုတာမျိုး မပါလို့ … နည်းနည်းတွေးခေါ်ရကြပ်နေတာဖြစ်မယ် … ။
ဖေ့စ်ဘွခ်မှာတင်တိုင်း အစစ်အမှန် မဟုတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်ဆိုတာ … ပြန်လည်သတိရစေလိုပါတယ် … ။
friend only ဖြစ်နေလို့ပါ။ ပုံကိုတော့ save ထားပါတယ်.ကျွန်တော် share လုပ်ခွင့်မတောင်းရသေးလို့ပါ။ သူ့ဓါတ်ပုံကို တော့စစ်ထားပါတယ်။ ဒီပြင်မြို့နယ်တွေမှာ ရော အဲဒိ ထိန်းသိမ်းခ 2000 ဆိုတာမှန်လားသိချင်လို့ပါ။ ဒီပုံအတွက် မှားယွင်းခဲ့ရင် ချက်ချင်းတောင်းပန်ပါ့မယ်
တာဝန်ကိုယ်စီ ရှိကြသည်ပေါ့ကွယ်…။ အားလုံးကိုပြောတာနော်…။ ဘယ်သူတစ်ယောက်ထဲကမှ တာဝန်ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်လို့မဖြစ်ပါဘူးနော်…….။
ဒါ့ကြောင့်ပြောပါတယ်။ မီတာပျောက်ရင်ကိုယ့်တာဝန်ပါလို့။ သများမမှားဘူး။ တွေ့ရား။
မိမိ မီတာကို မိမိတာဝန်သာယူရပါ၏။ကောင်းမြတ်သူတို့ လိုပါဘဲဗျာ ဒီမှာလဲ။
တစ်လကို အခြေခံ(၁၀)ယူနစ်ကို (၂၅)ကျပ်နှုန်း အဲဒီထက်ပိုလာတဲ့ ယူနစ်တိုင်းအတွက်
၅၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်ကျသင့်ပါတယ်။အနော်တို့ မြို့ က ဈေးအတော်ကြီးလေ၏။